MAHALEVITRA Photographi Fahafatesana FSX & P3D - Rikoooo
Mpanoratra: Antonio C, Maurizio G (Ozx) harato amin'ny Holger Sandmann
Sarin'ny sary an'ny mponin'i California Valley Etazonia any FSX SP2 ary P3D (Prepar3D) noforonina tamin'ny famahana 2m / piksel (ny faritra sasany mahaliana dia natao tamin'ny 1m / piksel, toa an'i Trona), miaraka amin'ny autogen sy ny hazavan'ny alina. Amin'ny vanim-potoana fahavaratra ihany. Misy farihy mahafinaritra misy rano animated.
Dia ho hitanao fa io faritra manolotra maro ny zavatra mahaliana ny mahita, fa tsy an-tany efitra ... misy mahafinaritra toeram-piompiana sy ny tontolo ambanivohitra, tena mahafatifaty tanàna, orinasa faritra sy ny toerana manodidina Manova be dia be nandritra ny andro .... ianao hahita loko mahafinaritra tsipirian'ilay miankina amin'ny fotoana manidina. Tena tsara tarehy koa amin'ny alina, vaovao no Nanandrana fomba mba hahatakatra ny nightlights, tena zava-misy.
Misy fampahalalana fanampiny azo jerena ao amin'ny "Start menu -> Add-ons Rikoooo -> Death Valley Photoreal FSX & P3D"
Tena lehibe mitandrina rakitra 1,07 GO, dia izany mafy kevitra ny hampiasa ny Download rindrambaiko Mandehana mafimafy kokoa mba hiato kely sy indray amin'ny fotoana ny fisamborana mba tsy ampoizina (oh FlashGet).
Zava-dehibe, ny fomba fampiasana ny toerana manodidina? Afaka maka ny fiaramanidina ho Ohatra avy any amin'ny seranam-piaramanidina ny lafaoro Creek (karazana lafaoro lehibe Creek or L06) Na avy amin'ny toerana bebe kokoa tahaka ny ao amin'ny lisitra:
Seranam-piaramanidina akaiky indrindra:
Lafaoro Creek (L06) California
Fatana Sodina Wells (L09) California
Irery Pine (O26) California
Ity ambany ity ny faritra alaina sary azo tanterahina raisin'ilay scenery. Ankoatr'izay, ny takelaka mahazatra FSX/P3D dia hampiseho indray.